भगवानको पूजाका लागि विहान सबै भन्दा उत्तम समय किन ? -
August 17, 2018 Spnews रोचक / विचित्र 0
एजेन्सी । भगवानको पूजा गर्नका लागि विहानको समय सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। हुनत दिनभर जुन कुनै समयमा पनि सच्चा मनले भगवानको आराधना गर्न किन्छ।
तर मुहुर्तमा पूजा गर्नुको विशेष महत्व हुन्छ। विहान विहान पूजा गर्दा हाम्रो मन पनि एकाग्र हुन्छ। निद्राबाट उठ्दा मन शान्त र स्थिर रहेको हुन्छ।
यताउताको कुरामा हाम्रो दिमाग गएको हुँदैन्। भगवानको भक्तिका लागि मनको एकाधिकार एकदमै महत्वपूर्ण छ।
विहानपछि हामीले अन्य समय कयौँ काममा विताउने गर्दछौँ। जसका कारण हाम्रो मस्तिष्क पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने गर्दछ। कामले गर्दा मन असान्त हुने गर्दछ। त्यस्तो हुँदा कुनै बेला अधार्मीक कुरामा पनि मन पुग्ने गर्दछ।
यस्तो अवस्थामा पुजा गर्न निकै मुस्किल हुने गर्दछ। त्यसैले यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै विहानको मुहुर्त पुजाका लागि निकै उत्तम हुने गर्दछ।
आजदेखि धुवाँ फाल्ने गाडी निषेध
एक हजारको नोट त देखेको छैन सरकार ? बर्षको १९ हजार कर कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ?
November 8, 2018 Spnews रोचक / विचित्र 0